Daawo: Taliye Cusmaan Hudeey oo wacad ku maray aargoosi iyo cafis la'aan - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Taliye Cusmaan Hudeey oo wacad ku maray aargoosi iyo cafis la’aan
Daawo: Taliye Cusmaan Hudeey oo wacad ku maray aargoosi iyo cafis la’aan
Guriceel (Caasimada Online) – Taliyaha Saldhiga Booliska Degmada Guriceel, Dhamme Cusmaan Cali Hudeey ayaa markii u horeysay ka hadlay ka bixitaanka Ahlu-Sunna ee degmada, kadib dagaal maalmo qaatay oo dhexmaray labada dhinac.
Taliye Dhamme Hudeey ayaa wacad ku maray inaysan ka hari doonin cidkasta oo gacan siisay Ahlu-Suna, aysan ogaalan doonin inay si nabad ah ku joogan gudaha degmada Guriceel, sida uu sheegay.
“Degmada Guriceel amaankeeda guud ahaan waa la xaqiijiyey, ciidamada dowlada federaalka qeybaheeda kala duwan iyo kuwa Galmudug ayaa xaqiijiyey, waxaa leeyahay shacabka guryihiina kusoo laabta,” ayuu yiri Taliye Hudeey.
“Nidaamka dowliga ah waa midka keliya ee umadda deeqa, waa midka cid walba ay rabto in nidaam dowli ah hesho, umaddaana iyada oo degan oo nabada iyo nimco haysata ayaa waxa soo gaaray dad dowlad diid ah oo dhibaato u geystay.”
Sidoo kale waxa uu sheegay in marnaba ay ka tanaasuli doonin nidaamka dowliga, isaga oo bulshada kala duwan ee degmada Guriceel ugu baaqay difaaca nidaamkaas iyo ka shaqeynta amaanka.
“Waxaa rabaa in aan halkan ka cadeeyo cid walba oo dhibaatadii bulshada degmada Guriceel loo geystay ka garab shaqeyneysay kama hareyno, haddii ay af ku taageertay iyo haddey cod ku taageertay iyo hadday awood ku taageertay gacanta. Tallaabo adag ayaa ka qaadi doona mana aqbali doono middaas.”
Ugu dambeyntiina waxa uu dalbaday in dadkii boobey saldhiga degmada Guriceel ay si dhaqso ah usoo celiyaan agabka ku maqan, kaasi oo la bilileqaystay markii ay Ahlu-Suna iskaga baxday degmada.